Shabangu calls for sanctions on Zim diamonds to be lifted - City Press
#RIPShoes Business Shabangu calls for sanctions on Zim diamonds to be lifted
Victoria Falls – South Africa and Namibia have called for an end to sanctions on Zimbabwean diamonds imposed after human rights groups said hundreds of diggers were killed by the police and army, and sale proceeds were being channelled to the military.
Speaking at the inaugural Zimbabwe diamond conference yesterday, Mineral Resources Minister Susan Shabangu said South Africa was committed to lifting the economic sanctions imposed on Zimbabwe.
Meanwhile, former president Thabo Mbeki said Zimbabwean natural resources should benefit locals and not a group of elites.
In his address at the Zimbabwe Diamond Conference yesterday, where he was the guest speaker, Mbeki said the country’s political leadership have to ensure that the benefits cascade to the masses.
Zimbabwe’s mines minister told the same conference that at least $30 million is trapped by international institutions under the anti-Marange diamond campaign.
Chaim Even-Zohar, the president of Tel Aviv-based diamond consulting service Tacy Limited, told the conference Zimbabwe is earning 75% of potential diamond value due to economic sanctions as it cannot get the best market prices.